Lorcaserin HCL အမှုန့် (1431697-94-7) hplc≥99% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှု
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Lorcaserin HCL အမှုန့်
rating: SKU: 1431697-94-7. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Lorcaserin HCL မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (1431697-94-7) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Lorcaserin (1431697-94-7) HCL အမှုန့် အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်သောဦးနှောက်ထဲမှာဓါတုဗေဒအချက်ပြမှုများကိုသာသက်ရောက်သည်။ သငျသညျသေးငယ် meals.Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်နှင့်အတူအပြည့်အဝခံစားရကူညီခြင်းဖြင့် Lorcaserin HCL အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့် obesity.Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်ဆက်ဆံဖို့အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတူအသုံးပြုသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆီးချို, မြင့်သောလက်စထရော, ဒါမှမဟုတ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအဝလွန်ခြင်းကုသရန်အသုံးပြုသည် ။
Lorcaserin (1431697-94-7) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Lorcaserin (1431697-94-7) HCL အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 212 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: -20 ℃
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်အောက်တွင်စျေးကွက် Lorcaserin (CAS 1431697-94-7), အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း Lorcaserin HCL အမှုန့် 846589-98-8 ဖြစ်ပါသည်, BELVIQ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ FDA ကအဝလွန်နေသောလူများအတွက် lorcaserin HCL အတည်ပြု (ကခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ် 30 သို့မဟုတ်မြင့်မား၏ BMI) သို့မဟုတ် (27 တစ် BMI နှင့်အတူသို့မဟုတ်အထက်) အဝလွန်နေကြသည်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအနည်းဆုံးအလေးချိန်-related ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိသည်သောသူ အမျိုးအစား2ဆီးချို, သွေးတိုးသို့မဟုတ်မြင့်မားသောလက်စထရောလ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘို့အ Lorcaserin အသုံးပြုမှုကဘာလဲ
Lorcaserin HCL အမှုန့် 846589-98-8, serotonin အဲဒီ receptor agonists အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ Lorcaserin HCL အဆီဆုံးရှုံးမှုများအတွက်, အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့အစားအစာနှင့်ကာယဗလနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာတခါတရံမြင့်မားတဲ့လက်စထရောမြင့်မားသွေးပေါင်ချိန်, ဒါမှမဟုတ် type2 ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆက်စပ်အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ပေးထားသည်။ သို့သော် Lorcaserin Hydrochloride (Lorcaserin HCL) (ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါ, ဆီးချို, သွေးတိုးကဲ့သို့) မဆိုအခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေဆက်ဆံပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လုပ်ဆောင်ချက် Lorcaserin ယန္တရား
Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နေဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ် - အထူးသ serotonin အဘို့အဦးနှောက် receptors ကိုသက်ဝင်အသုံးပြုပုံမွတ်မပြေခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု၏ခံစားချက်များကိုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းတစ် neurotransmitter ။ အစားအစာစားသုံးမှုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်ပစ္စုပ္ပန် hypothalamus နှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုစင်တာ ventromedial နျူကလိယမှာတည်ရှိပါတယ်မွတ်မပြေနိုင်သောစင်တာကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစင်တာများနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကနေအမျိုးမျိုးသောသွင်းအားစုအစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်အာရုံခံနှစ်မျိုးလက်ဆောင်သည်အဘယ်မှာရှိ arcuate နျူကလိယထဲတွင်ဆုံ။ agouti-related ပရိုတိန်းနှင့် neuropeptide Y ကိုထုတ်လုပ်ပထမ, အစားအစာစားသုံးမှု stimulatory အုပ်စုတစ်စု; ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်း (လှည်း) နှင့်လိုလားသူ opiomelanocortin (POMC) အာရုံခံ်နှင့်ဒုတိယအ, အစားအစာစားသုံးမှု inhibitory အုပ်စုသည်။ POMC အဆိုပါ hypothalamus.Paraventricular နျူကလိယထဲမှာအရာ activated လွှတ်ပေး alpha-melanocyte-လှုံ့ဆော်သည့်အခါဟော်မုန်း (Alfa-MSH) .Both inhibitory နှင့် stimulatory အာရုံခံနောက်ထပ်စီမံကိန်းများကို paraventricular နျူကလိယ appetiteIn ကုထုံးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း melanocyte5receptors (MC2R) များပါဝင်သည်, 4-HT 4C receptors ပါရှိသည် ဆေးများ lorcaserin အလှည့်အတွက် Alfa MSH ၏ဖြန့်ချိခြင်းများကိုဖြစ်စေတတ်သည့် POMC အာရုံခံအပေါ်တစ်ဦးရွေးချယ် 5-HT 2C agonist အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ နောက်ထပ် Alfa MSH စာစားချင်စိတ်ကိုအတွက်ကိုလျော့ချဖို့ဦးဆောင်သည့် hypothalamus အတွက် paraventricular နျူကလိယအတွက် MC4R အပေါ်ပြုမူ။ supratherapeutic ဆေးများမှာတော့ lorcaserin လည်း 5-HT 2B နှင့် 5-HT 2A receptors အပေါ်ပြုမူ။
Lorcaserin HCL အမှုန့် (CAS 1431697-94-7) သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Lorcaserin HCL အမှုန့်သည်အဖြူမှအဖြူရောင်ရှိအဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်ပြီးရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး 400 mg / mL ထက်ကြီးသောရေသည်။ BELVIQ XR ဆေးပြားတစ်ခုစီတွင် ၂၀.၈ မီလီဂရမ် lorcaserin hydrochloride အမှုန့်နှင့် 20.8 mg lorcaserin hydrochloride hemihydrate ပါ ၀ င်သည်။ နှင့်အောက်ပါမလှုပ်မရှားပါ ၀ င်သည့်အရာများပါ ၀ င်သည်။ microcrystalline cellulose NF; USP mannitol; hypromellose 20.0 USP; ethylcellulose အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားအမျိုးအစား B ကိုအဲန်အက်ဖ်; hypromellose 2208 USP; colloidal silicon dioxide NF; polyvinyl အရက် USP; polyethylene glycol အဲန်အက်ဖ်; titanium dioxide USP; talc USP; FD&C အဝါရောင် # 2910 / နေ ၀ င်ဆည်းဆာနေ ၀ င် FCF; လူမီနီယံရေကန်; သံအောက်ဆိုဒ်အဝါရောင် NF; သံအောက်ဆိုဒ်အနီ NF; နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ် stearate အဲန်အက်ဖ်။
Lorcaserin HCL အမှုန့် 846589-98-8 တက်ဘလက်ပုံစံကိုလာနဲ့ပုံမှန်အား 1-2 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ယူတတ်၏, အတူသို့မဟုတ်အစားအစာမရှိဘဲ။ Lorcaserin တစ်ဦးလျှော့ကယ်လိုရီအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအစီအစဉ်နှင့်အတူအသုံးပြုရမည်။
ထိုကဲ့သို့သော isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), tranylcypromine (Parnate), selegiline (Emsam, Eldepryl, Zelapar), rasagiline (Azilect) အဖြစ် -monoamine oxidase inhibitors
ထိုကဲ့သို့သော escitalopram အဖြစ် -selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (Lexapro), sertraline (Zoloft), citalopram (Celexa), paroxetine (Paxil), fluoxetine (Prozac, Sarafem), နှင့် fluvoxamine (Luvox)
ထိုကဲ့သို့သော trimipramine အဖြစ် -tricyclic စိတ်မကျဆေး Antidepressants (Surmontil), amitriptyline (Elavil), nortriptyline (Pamelor, Aventyl), protriptyline (Vivactil), နှင့် clomipramine (Anafranil)
AASraw ထံမှ Lorcaserin HCL အမှုန့် (CAS 1431697-94-7) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် 1.To စုံစမ်းရေးကော်မရှင်, ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်း Skype ကို ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် (CSR) ။
Nootropics အမှုန့် (14)
Urolithin အမှုန့် (2)
Spermidine အမှုန့် (3)
11 / 26 / 2017 ၏2
12 / 17 / 2017 ၏1
08 / 19 / 2021 ၏
10 / 31 / 2017 ၏
PCT Letrozole ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - ကျွန်ုပ်သိသင့်သောအချက်ငါးချက် !!!
11 / 05 / 2017 ၏
အဆုတ်ကင်ဆာကုသရန်ဆေးဝါး ၇ မျိုးကို FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်
07 / 01 / 2021 ၏
Sunitinib Malate အကြောင်းမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - AASraw
06 / 09 / 2021 ၏
06 / 01 / 2021 ၏
ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးများ Acalabrutinib: CLL / SLL / MCL အတွက်ကုသမှု
05 / 22 / 2021 ၏